Posted by ညီရဲသစ် at 13:40
မောင်မျိုး 21 November 2012 at 14:18
အိမ်ပြန်ချိန်တွေ နောက်မကျတော့ဘူးပေါ့ ညီကတော့ ၀မ်းသာတယ် ငွေနောက်လိုက်ရင်း အဝေးဆုံးပျံတဲ့ ငှက်တွေလို အစားထိုးမရတဲ့ အရာတွေ မဆုံးရှုံးချင်တော့ဘူးဗျာ ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ် တစ်နေ့နေ့ပေါ့ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေး ကျနော်တို့ အိမ်ပြန်ချိန်တွေအကြောင်း စကားဝိုင်းဖွဲ့ချင် ဖွဲ့နိုင်တာပဲး)
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 21 November 2012 at 14:25
မှန်တာပေါ့ အားလုံးပဲတနေ့ အိမ်ပြန်ချိန်ရှိလာမှာပေါ့
Anonymous 21 November 2012 at 14:50
မိဘအနားမှာ နေရတဲ့ ကံကောင်းတဲ့ ဘ၀ ကို ပြန်ရတော့မယ်နော်။ ၀မ်းသာပါတယ်။ အားလုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။
အလင်းသစ် 21 November 2012 at 16:29
အေးဗျာ... ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး မေမေ့ကို သတိရလိုက်တာ... ရေခြား၊ မြေခြား မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ကြေးနန်းဝင်လာမှ မေမေဆုံးကြောင်း သိလိုက်ရပြီး... (၇)ရက်ဆိုတဲ့ ခွင့်နဲ့ မြေချနှုတ်ဆက်ခဲ့ရဖူးတယ်... ဘာပဲပြောပြော အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ အရာတွေကို အရာရာထက် တန်ဖိုးထားနိုင်ဖို့ အိမ်ပြန်ချိန်တွေ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိလာနိုင်ပါစေဗျာ.....
Cameron 21 November 2012 at 17:27
ဟိုအရင်ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်လွမ်းခဲ့ဖူးတာကို အမှတ်ရသွားမိတယ် ပြီးတော့ ဖေဖေဆုံးတုန်းကအကြောင်းကိုရောပဲ
စံပယ်ချို 21 November 2012 at 18:17
အန္တရယ်ကင်းပြီး ကျန်းမာစွာနဲ့ အမြန်ဆုံး မိမိ မိသားစုနဲ့တွေ့ရပါစေလို့
တောက်ပကြယ်စင် 21 November 2012 at 20:37
...အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဟူး ဟူး အနွေးထွေးဆုံးပဲ အိပ်မရတဲ့ ညများစွာထဲ...
ဇာတ်ဆရာအလိုကျ မီးစဉ်ကြည့်ပြီး ကနေရတဲ့ဘ၀မှာ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ မဆုံးရှုံးမိပါစေနဲ့လို့
ညိမ်းနိုင် 21 November 2012 at 21:13
အိမ်ပြန်ချိန်တွေက အနှေးနဲ့အမြန် ရောက်လာတော့တာပဲနော်....၊
အကိုလည်း ဒီရောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ မိအိုဘအိုတွေ ဘုရားသိကြားမလို့
ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ပဲ ဆုတောင်းနေရတယ်....၊သက်တမ်းမကုန်ခင် ပြန်ဖို့
အင်ကြင်းသန့် 22 November 2012 at 10:12
ကိုကြီးရဲရဲကတော့ အိမ်ကိုပြန်နိုင်ပြီပေါ့....အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ....မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ဆုံကြမယ်။
ညီလင်းသစ် 22 November 2012 at 16:38
ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ဝမ်းသာတယ်ဗျာ... ကိုညီရဲ..၊ ဘဝမှာက ဒီလိုပဲ ရွေးချယ်မှုတွေ၊ အပေးအယူတွေ တချိန်လုံး လုပ်နေရတာပဲ မဟုတ်လား၊ ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက်တွေ တစ်ခုပြီိးတစ်ခု မြင်နေခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်အလှည့် ရောက်လာတော့ အချိန်မနှောင်းခင် အိမ်ပြန်နိုင်မှာမို့ ညီ ကံကောင်းပါတယ်..၊ ကျနော်လည်း မိဘတွေအတွက် နောက်ဆံငင်တဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ ဆုတောင်းနေခဲ့ ရတာပါပဲ..၊
လတ်တလောမှာ ကျနော်တို့ ဆုံဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဦးစားပေးသင့်တာ တစ်ခုကို ဦးစားပေးခွင့် ရတဲ့ ညီ့အတွက် တကယ်ပဲ ဝမ်းမြောက်ပါတယ်၊ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ကျနော်တို့တွေ ဆုံကြအုံးမှာပါဗျာ...။
ချစ်စံအိမ် 23 November 2012 at 10:47
ငြိမ်းစိုးဦး 23 November 2012 at 12:32
လမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းမပျောက်ရင် အိမ်ပြန်ချိန်ကို တွက်ဆနိုင်မယ်ထင် ...
Anonymous 25 November 2012 at 15:24
အိမ်ပြန်ချိန်ကိုတော့အမြန်ဆုံးရောက်စေချင်တယ်ဗျာ ။ ရေမြေခြားမှာနေရတဲ့ ဘ၀ ကအမြန်ဆုံးလွှတ်ချင်ပြီး ။၀တ္တုကိုဖတ်ပြီး တကယ့်ကိုခံစားရတယ်ဗျာ။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 29 November 2012 at 04:52
အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်လာတဲ့ အတွက် အကို့အစား ပျော်မိပါတယ်အကိုရေ.. ညီမလေးတို့လည်း အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ဖို့ ..မျှော်လင့်ကြိုးစားနေရဆဲမို့.. တစ်နေ့တော့ အိမ်ပြန်ကြရမှာပါ...အကို..
mstint 1 December 2012 at 00:18
အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ရေးအားရှိပြီပေါ့ မောင်ညီရဲရေ။ တိုင်းတစ်ပါးမှာ မပျော်ပိုက်ပေမယ့် ဘဝတစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် အချိန်တွေပေးဆပ်ရင်း အိမ်ပြန်ချိန်လေးတွေကို မျှော်တလင့်လင့်ဖြစ်နေကြသူများ ရင်ထဲက ဆန္ဒအတိုင်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေ။
ခရစ္စတလ်2December 2012 at 18:28
ခဏတာလေး ပြန်မိတာတောင် အလွမ်းတွေက ထွေးပွေ့ဆဲ ......... :(
ပန်းချီ 29 December 2012 at 00:19
စာအရေးအသား တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ဖတ်ပြီး အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရတယ်။ ကိုယ်ကလဲ အိမ်ပြန်ချင်တဲ့သူဆိုတော့။ ရဲရဲ တကယ်ပဲ အိမ်ပြန်ခွင့်ရရင် ဝမ်းသာပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ အားလုံးအိမ်ပြန်ကြရမှာ။
roseayemaung7January 2013 at 16:14
လငျးခတျေဒီနို9January 2013 at 03:12
ဟုတ်တယ် တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကို ပြန်ရမှာပေါ့ဗျာ ပြန်ကို ပြန်ရမှာပေါ့ဗျာ
San San Htun 11 January 2013 at 12:49
အိမ်ပြန်ချိန်ဆိုတာ အိမ်နဲ့ ခွဲနေတယ့်သူတိုင်း တောင့်တကြတယ့် အရာတခု..